Ahoana ny fomba hanaovana antso an-tsary amin'ny WhatsApp | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny fomba hanaovana antso an-tserasera amin'ny WhatsApp
WhatsApp dia iray amin'ireo rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra vetivety, izay tsy natolotray omaly raha afaka manome antso an-tsary. Marina fa andro vitsivitsy izao, ireo mpampiasa ny kinova beta an'ny fampiharana malaza dia afaka mampiasa an'io fampiasa io, fa izao dia azon'ny mpampiasa rehetra apetraka izany, na inona na inona ny rafitra miasa finday ampiasainy ary efa izy ireo misy na dia ho an'ny Windows 10 Mobile aza, andiany WhatsApp izay mazàna dingana roa na telo ao ambadiky ny an'ny Android na ny iOS.
Amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity dia hanazava anao amin'ny fomba tsotra sy feno izahay ny fomba fanaovana antso an-tsarimihetsika amin'ny WhatsApp Ary araraoty tsara ity fiasa vaovao ity izay mametraka ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo be mpampiasa indrindra eto an-tany ankehitriny eo am-pelatanantsika.
Alohan'ny hanazavanao ny fomba hanaovana antso an-tsary WhatsApp, dia tsy maintsy milaza aminao aloha izay tokony hataonao mba hidirana amin'izy ireo, ary izany dia tsy ho hitanao izany amin'ny alàlan'ny toerana misy anao ary tsy hanao na inona na inona ao amin'ilay kinovanao WhatsApp anao ankehitriny, afa-tsy ianao efa nanavao ianao na vita fa tsy tsapanao akory.
1 Ampivoary ny WhatsApp mba hahafahany miantso video
2 Ahoana ny fomba hanaovana antso video tsikelikely
3 Mitandrema, ny fandaniana data dia avo dia avo ary ny kalitao dia ambany dia ambany
Ampivoary ny WhatsApp mba hahafahany miantso video
Ny antso an-tsarimihetsika WhatsApp, araka ny efa nolazainay, dia efa teo amin'ny kinova farany an'ny serivisy fanta-daza, saingy mba hampavitrika azy ireo ary manomboka mampiasa azy ireo dia tsy maintsy havaozy ny fampiharana miaraka amin'ilay kinova vaovao navoaka omaly. Efa misy izany amin'ny alàlan'ny Google Play sy ny App Store, izay azonao alefa amin'ny alàlan'ireto rohy manaraka ireto.
Raha vao manavao ilay rindranasa ianao, isaky ny miditra amina resadresaka amina namana, olom-pantatra na mpianakavy ianao, Tokony ho hitanao eo amin'ny zoro ankavanana ambony ny kisary iray toa ilay hitanao amin'ity sary manaraka ity;
Raha tsy mahita ny kisary amin'ny sary isika dia satria tsy manana WhatsApp nohavaozina amin'ny kinova farany izahay, zavatra izay tokony hataonao amin'ny fomba tena ilaina mba hahafahanao manomboka mampiasa antso an-tsary. Ny famoahana dia efa navoaka eran'izao tontolo izao ka ny safidy izay tsy ho noraisinao dia nolavina tanteraka.
Raha vao nohavaozina ny WhatsApp ary fantany fa manana ny kinova farany fampiharana ianao dia mety hisy zavatra tsy mety. Ny tolo-kevitray dia ny hanaisotra ny rindranasa amin'ny fitaovanao sy hampidina ary hametraka azy io indray mba hamafana tsara. Miaraka amin'izany dia efa tokony hiseho aminao ny kisary ary afaka manao antso video ianao.
Ahoana ny fomba hanaovana antso video tsikelikely
Raha hanao antso an-tsary amin'ny WhatsApp ianao dia tsy maintsy manindry ilay kisary izay efa hitantsika taloha na mampiditra ny mombamomba ny fifandraisana avy aiza no ahafahantsika mandefa hafatra na miantso, amin'ny alàlan'ny fampiharana mihitsy. Miseho izao koa ilay kisary hanaovana antso an-tsary.
Raha vantany vao manomboka ny antso an-tsary isika dia hahita zavatra mitovitovy amin'izay asehoko anao eto ambany. Noho ny antony izay azonareo rehetra dia takatrao ny nomeraon-telefaona nifandray izay nanao ilay antso an-tsary.
Raha vantany vao mandeha ny fifandraisan-davitra antsointsika dia afaka segondra vitsy vao manomboka mampiseho ny sarin'ilay olona iantsoantsika. Amin'ny fotoana voalohany ary miankina amin'ny fifandraisana misy antsika amin'ny tamba-jotra ny sary izay ananan'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny default na mivantana ny sariny dia haseho.
Hiseho eo amin'ny zoro havanana ambony ny sarinay, asehoko anao amin'ity sary manaraka ity. Raha nanandrana an'ity karazana serivisy ity tamina fampiharana hafa ianao dia mitovy tanteraka amin'ny fampisehoana ny sarinao ao anaty boaty kely sy ny sarin'ilay olona hafa eo amin'ny efijery sisa.
Anisan'ireo safidy misy ihany koa ny azo atao ny mampiato antso;
Ny fiasan'ny antso an-tsarimihetsika WhatsApp dia tsotra ary tsy mila fotoana be loatra ianao hianarana ny fomba fikirakirana an'io fampiasa vaovao io, na dia eny, raha vao manandrana azy ireo ianao dia ho tsapanao fa mbola maro ny zavatra manatsara ny mpamorona ny fampiharana ny fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa eran'izao tontolo izao ka samy afa-po na farafaharatsiny mitovy amin'izay ampanantenainy ireo sary fampiroboroboana ireo karazana antso ireo.
Mitandrema, ny fandaniana data dia avo dia avo ary ny kalitao dia ambany dia ambany
Omaly teo am-panandramana miantso video, androany hahafahako manao an'ity lahatsoratra vakinao ity, iray amin'ireo zavatra nahasarika ahy indrindra ny ratsy kalitaon'ny antso an-tsary natao tamin'ny alàlan'ny WhatsApp. Ny fitsapana dia natao tao an-tranoko, samy olona nifandray tamina tambajotra WiFi, ny kalitao dia tena ratsy tamin'ny iOS sy Android.
Heveriko fa raha mifandray amin'ny tamba-jotra amin'ny tambajotra isika, ohatra, 3G na 4G dia ho ambany dia ambany, zavatra iray izay tena sarotra takarina, raha ankoatr'izay dia avo dia avo ny fandaniana data.
Ary ireo antso an-dahatsary ataontsika amin'ny alàlan'ny WhatsApp dia mandany hatramin'ny dimy heny noho ny rindranasa hafa mamela io fampiasa io, ohatra, FaceTime. Amin'ny alàlan'ny fomba tsotra iray dia afaka nanamarina izany izahay antso mahazatra dia tsy nandany na inona na inona intsony ary tsy latsaky ny 33MB isa-minitra, izay tsy misy ifandraisany raha mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi isika, saingy izay tena matotra tokoa raha mampiasa ny fifandraisana data izahay.
Amin'izao fotoana izao dia eo am-pivoarana ny antso an-tsarimihetsika WhatsApp, noho izany dia azo inoana kokoa fa rehefa mandeha ny fotoana dia tsy hanatsara ny kalitaony fotsiny izy ireo, fa hampihena ny fihinanana data.
Efa nanandrana ireo antso an-tsarimihetsika WhatsApp efa misy ve ianao nanomboka omaly?. Lazao anay ny zavatra niainanao tamin'ny fampiasana ny toerana natokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ahoana ny fomba hanaovana antso an-tserasera amin'ny WhatsApp
Wolder dia namely ny latabatra tamin'ny vera VR tamin'ny vidin'ny aretim-po
Ilay OnePlus 3T vaovao dia efa zava-misy izay mitentina 439 euro